ADSS ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ် D8 ရပ်ဆိုင်းမှုပတ်ပတ်လည် ADSS fiber optic cable ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသို့မဟုတ် FTTX ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဝါယာကြိုး cable ကို drop ။ ADSS ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ် D8 dielectric ဖြစ်ပါတယ်နှင့် 100 မီလီမီတာအထိထောင့် <20, တို span နှင့်အတူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပြင်ပတွင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
Dielectric ADSS suspension clamp is very easy for installation, and it does not require additional tools. This type of ADSS ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ် us handily adjusted plastic loop allows simple installation on cross-arm or suspension brackets and FTTH ချိတ်, as well.
ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ် D8 cable ကိုချင်း 8-12 မီလီမီတာနှင့်အ overhead ADSS ကြိုးတွေ၏လူကြိုက်များပ္ပံအများစုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ 12-16 မီလီမီတာများအတွက် neoprene အင်္ကျီလက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါလက် cable ကိုအတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လိုက်နာမှုပေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော fixation နှင့်ကြာချိန်အာမခံထား။
ပစ္စည်းများ: ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည် thermoplastic, PVC ။
ယခင်: fiber optic Adapter ကို SC
နောက်တစ်ခု: Drop Wire Clamp D2
Dielectric ADSS ရပ်ဆိုင်းမှုညှပ်